UNkz Ntokozo Hlela oyimenenja yezokuxhumana nokukhangisa eMadlula Guest House uthe isiphepho sibagqeme engeqiwa ntwala ngesikhathi besazikhotha amanxeba ngokuphazamiseka kokuhanjelwa kwendawo yabo ngokubheduka kweCOVID-19 nezibhelu. “Uhamba kancane kakhulu umsebenzi kulezi nsuku kangangoba kuyenzeka kuphele isonto kungafikanga muntu ukuzolala e-lodge ekubeni nyanga zonke kumele sikhokhele ugesi namanzi kwamasipala. Ukuvakashela kwemeya yesifunda uMnu Zuma kusinikeze ithemba lokuthi uxhaso abazoza nalo luzowenza umehluko nesimo sibuyele kwesasiyisona phambilini,” kusho yena.
Imeya uMnu Zuma ithe basizwile isikhalo sosomabhizinisi abasemkhakheni wezokuvakasha sokudonsa kanzima kwamabhizinisi abo emuva kokuhlasela kweCOVID 19, izibhelu nesichotho nesiphepho. Ithe bahambele eMadlula Guest House beyozwa umonakalo abasala nawo kwakuhlasele isiphepho esasihambisana nesichotho. “Singakusho ukuthi ukukhala kosomabhizinisi bezindawo zokungcebeleka kusithintile nathi siwubuholi besifunda ngoba ezokuvakasha ngomunye wemikhakha ebaluleke kakhulu ekufukulweni komnotho. Sithembisa ukuthi lokhu kukhala kwabo sizokudlulisela ekomidini lezimeya zomasipala abawu-7 abangaphansi kwaseMgungundlovu sibone ukuthi singelula kanjani isandla ukuze basizakale,” usho kanje.
Magaye Cele IMEYA yoMkhandlu waKwaDukuza, enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu Natal, uKhansela Lindile Nhaca usewamukele umphumela obathole bengenacala wophiko lweSpecial Investigation Unit (SIU) obumayelana nezinsolo ngokukhwabanisa izinsiza zokuvikela iCovid- 19 (Personal Protection Equipment) ebezikade zibhekiswe ngqo kulo Mkhandlu. Lo mbiko ubumayelana nokwakwenzeka ngesikhathi kuhanjiswa izidingo zokhuvethe iCovid -19 kusukela ngomhlaka-23 kuJuly kuze kube umhlaka-30 kuSeptember ngo-2021. Ukutholakala umsulwa […]